DSA: Mhumhi paWestwind Chivabvu 25 yeSteam uye iOS - Gamepoint - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
DSA: Mhumhi dziri kuWestwind dzinouya kuSteam uye iOS muna Chivabvu 25
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 28, 2022 | nhau, Vhidhiyo mitambo
Muparidzi wechinyakare weHessian Ulisses Spiele uye mugadziri Ave neGravity vari kuburitsa basa idzva kubva kune epic world ye "The Black Eye" musi wa25 Chivabvu. Ngano Dzakakanganwa - Mhumhi dziri kuWestwind dziripo paSteam uye Gamesplanet yePC, iPhone uye iPad muApple App Store ye17,99 €.
Iyo Wolves paWestwind Deluxe Edition ichaburitswa panguva imwe chete uye ichange iine mutambo mukuru, iro rakasarudzika bhuku reunyanzvi The Art uye World of Wolves paWestwind, iyo analogue solo adventure The Vampire of Havena uye rwiyo rwemutambo. Iyo yemuviri vhezheni yedeluxe edition ine mavara akadhindwa bhuku remifananidzo seyakaoma vhezheni yave kuwanikwa mune Ulisse's F shopu kufanoodha.
Inooneka novel Ngano Dzakakanganwa: Mapere paWestwind
Gara munyika inozivikanwa yekufungidzira yeAventuria, Mhumhi dziri kuWestwind dzinodenha vatambi kuti vaite sarudzo dzakafanira kuti vapukunyuke pakuvhima kwechakaipa chichangobva kumutswa. Asi muvhimi ndiani uye ndiani anovhimwa? Vatambi vanotora chinzvimbo chemurwi murwi Alrik kana muroyi mudiki Nedime, magamba asingatarisire anofanirwa kuyambuka nzvimbo dzine chando dzeThorwal kuti vawane uye vakunde njodzi. Vatambi vanofamba vachiyambuka umambo nechikepe cheThorwalian chinopamba Wolfsfang, vachigadzira mibatanidzwa nevasina kujairika vashandi kana kugadzira vavengi navo.
Sarudzo dziri pamwoyo weWolves paWestwind. Sarudzo yega yega inogona kutora magamba munzira yakasiyana, kukwezva shamwari nyowani, kushandura nyaya, uye kusunungura akawanda magumo. Mutambo weRPG zvinhu zvinoita kuti iwedzere kuita-yakazara: kukanda zvitsinga, kuita maneuvers, uchitarisa hutano uye manna nguva dzese. Kurwiswa kwega kwega kunofanirwa kusarudzwa nekungwarira, nekuti unogona kuzoda simba rako gare gare pane anorema anopikisa.
NeMakumhi paWestwind Deluxe Edition, vatambi vanowana yakanyanya kunyudza manzwiro eiyo yakasarudzika fungidziro yenyika yeAventuria. Iyo ine yakasarudzika bhuku reunyanzvi, iyo solo adventure The Vampire yeHavena uye yepamutemo ruzha. The Wolves on the Westwind Artbook idura remu-mutambo mifananidzo uye ruzivo rwekumashure paZiso Rakasviba uye dunhu netsika yeThorwal, pamwe neruzivo uye data kutungamira iyo adventure pachayo muDSA5.
Iyo Vampire yeHavena ndeye yega RPG chiitiko chinogona kuridzwa pasina tenzi kana vatambi vechikwata. Vatambi vanotsvedza munzvimbo yeakarasika akazvarwa uye akakurira muHavena. Avo chete vanotarisana nematambudziko uye kugona hunyanzvi hwavo vanogona kupona ichi chiitiko. Mutsindo wemutambo uyu une zvipfumbamwe zvimedu zvemuchadenga neanozivikanwa muimbi timu yaYannick Suess naRobinbirner. Dzichisanganisira zviridzwa zvekare zveScandinavia nekare, mateki aya anotakura vateereri akananga kunyika yeAventuria.
features of Ngano dzakakanganwa: Mhumhi pamhepo yekumavirira
Inooneka novel muAventuria, iyo ine mukurumbira nyika yekufungidzira kubva mumutambo-wekutamba wekirasi "Ziso Rima"
Anenge maawa gumi nemashanu ekutamba nguva, akakamurwa kuita zvitsauko zvakasiyana zverondedzero
Sarudzo yevaviri vakuru vane hunyanzvi hwakasiyana uye backstories
Vatambi vanogona kuwana anopfuura makumi matatu mavara uye akasiyana mamiriro zvichienderana nesarudzo dzavanoita
Inogona kudzokororwa, mutsara wenyaya ine akati wandei mamwe magumo uye mativi quotes zvinoenderana nesarudzo yemutambi
RPG-yakajeka gameplay ine mashiripiti zviperengo, yakasarudzika maneuvers, astral uye hupenyu mapoinzi
Yakakura ruzha uye mifananidzo inovimbisa kunyudzwa munyika yeEpic yeBlack Eye
Nekuisa vhidhiyo, unobvuma zvakavanzika zveYouTube.
Gara unblock YouTube
DSA5 Mitemo (Paperback): 5th Edition (Ziso Rakasviba -... * 19,95 EUR tenga
Kare Hasbro inobvumira vateveri veMonopoly kuvhota pane mavara
Inotevera Escape Room: Idzva bhuku repuzzle nezve vhidhiyo yemitambo yenyika
Mashiripiti Kuungana: Arena - Kuburitswa kweApp muna Ndira
Assassin's Creed Symphony: Kushanya kuDusseldorf zvakare muBerlin
Nintendo Shandura Lite yakaratidzwa: Yese ruzivo nezve iyo nyowani modhi
Berlinale 2019: Tevedzera guta guru rechimakumi matanhatu nemapfumbamwe mutambo wemufirimu unogara